Onye na-eme ka onye ọ bụla mara na ọ na-egwu ya China Manufacturer
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Ihe Mgbochi Na-ekpocha Ala > Onye na-eme ka onye ọ bụla mara na ọ na-egwu ya
Defogger dị ala, kwadoro onwe ya maka mpempe ọkụ. Ihe mbadamba ihe a na-agbaso n'azụ igwe ugbo gị. Ozugbo a kwadoro ya, enyo ahụ agaghị emegharị ma na gburugburu ebe mpempe akwụkwọ ahụ. Ọnọdụ okpomọkụ nke mirror a dị oke ezu maka ụgbọ ala ahụ iji kpuchie mirror. A na-ekpo ọkụ ọkụ ma na-ekesa kesaa gafee n'elu ihe mgbochi oku nke na-ezo n'azụ mirror gị. Ndụ ọrụ nke defogger bụ ihe dị ka 100000 awa. Ọ gaghị emetụta arụmọrụ nke ihe nkiri kpo oku n'oge ndụ arụ ọrụ. Enweghị nchegbu maka mmebi ma ọ bụ mmebi maka enyo